Igama legama le-AITKEN Igama leNtsapho kunye neNtsapho
Kuthetha ukuthini igama lokugqibela?
Efunyenwe ngokuyinhloko kwiSkotland, ifani ye-Aitken yindlela ephosakeleyo yegama elithi ADAM, elisentsingiselo ethi "indoda," esusela kwisiHebhere sesiHebhere , esithetha "umhlaba."
Igama lomthombo: iScottish
Igama legama elithethiweyo : I- AITKIN, AIKEN, ATKIN, ATKINS, AITKENE, ADKINS, AITKENS
Abantu abaPhezulu abanegama le-AITKEN
UJames Macrae Aitken - Umdlali weScottish chess kunye ne-World War II cryptographer
URobert Aitken - umshumayeli weBhayibhile wase-American karhulumente wenkulungwane
URobert Grant Aitken - isazi seenkwenkwezi saseMerika
UMichael Aitkens - umbhali we-TV waseBrithani
UJacqueline Aitken - umbhali wabantwana baseBrithani uJacqueline Wilson
U-AJ Aitken - isicatshulwa saseScotland
Uphi igama le-AITKEN Igama eliqhelekileyo?
Ngokubhengezwa kwebheno ukusuka kwi-Forebears, isibongo se-Aitken sibonakaliso sesibonakaliso kwiindawo eziphambili zaseScotland, ezifunyenwe kakhulu kwiWestan Lothian (ezi-21), i-Peeblesshire (22), i-East Lothian (33rd) ne-Stirlingshire (41). Kuqheleke ngokuqhelekileyo eMidiloan naseLunarkshire. Inqanawa ayifani kakhulu eNgilani, apho itholakala kwinani elikhulu kwiCumberland, kodwa ixhaphake ngokubanzi kwiNorthern Ireland, ngakumbi kwi-County Antrim.
I-WorldNames PublicProfiler ibonisa ukuhanjiswa okufanayo, nangona kubonisa ukusabalalisa ngokubanzi kwefayili e-Australia, eNew Zealand naseKhanada. Kwakhona kubhekisela kwisibongo se-Aitken esifumaneka kakhulu kwiSkotland.
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name AITKEN
Iintsingiselo zeeSweden eziqhelekileyo
Ukufumanisa intsingiselo yegama lakho lokugqibela laseScotland kunye nesi sikhokelo samahhala kwiintsingiselo kunye nemvelaphi yegama eliqhelekileyo lamaScottish.
Ingaba uqala ukuqala, okanye ufuna ukuqiniseka ukuba awuzange uphoswe nawaphi na amagugu, ezi ndawo ezili-10 ziyinqobo enkulu yokuqala kubani na ophando lwabazali baseBrithani.
I-Aitken Crest Family - Akusikho Oko Ucingayo
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto into efana ne-Aitken yentsapho okanye iingubo zeengalo ze-Aitken. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
Iprojekthi ye-Aitken DNA
Abantu abathile abanegama le-Aitken okanye enye yeendidi zayo (Aitkin, Aitkins) bamenywa ukuba bajoyine le projekthi ye-Y-DNA ukuze bahlolisise ukusebenzisa i-DNA kunye nomdabu wobudala bemfuzo ukuze bafumane imvelaphi yentsapho.
I-AITKEN Family Genealogy Forum
Ibhodi lemiyalezo yamahhala igxile kwiinzala zeokhokho baseAitken emhlabeni jikelele. Khangela kwi-archives yemiyalezo malunga nosapho lwakho lwe-Aitken, okanye ujoyine iqela uze uthumele umbuzo wakho we-Aitken.
I-FamilySearch - I-AITKEN Genealogy
Phonononga izigidi ezi-3 iziphumo ezivela kwiirekhodi zembali kunye nemithi yentsapho edibeneyo yomgca enxulumene nomgca we-Aitken kule webhsayithi yamahhala ebanjwe yiCawe likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
Igama le-AITKEN Igama lokuthumela
Uluhlu lokuposa lwangaphandle lwabaphandi begama le-Aitken kunye nokuhluka kwalo kubandakanya iinkcukacha zokubhaliselwa kunye neengxelo ezigcinwe ngophawu lwemiyalezo edlulileyo.
DistantCousin.com - I-AITKEN Genealogy & History Family
Hlola ii-database zolwazi zamahhala kunye neefayili zodidi lwegama lokugqibela igama elithi Aitken.
I-GeneaNet - IiRekhodi zeAitken
I-GeneaNet iquka iirekhodi zokugcinwa kweengxelo, imithi yentsapho kunye nezinye izibonelelo kubantu abanesibongo se-Aitken, kunye neengcamango kunye neentsapho ezivela eFransi nakwamanye amazwe aseYurophu.
I-Aitken Genealogy and Family Tree Page
Dlulisa amehlo kwiirekhodi zomnxeba kunye neenkcukacha ezibhalwe kwizahlulo zobuhlanga kunye neembali zabantu ngabanye abanefayili ye-Aitken kwiwebhusayithi yeGenesalogy Today.
Igama legama elithi FORD & Origin
I-LEFEBVRE - Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
UMOZ Igama lomnqophiso kunye nemvelaphi
INTSHAYELELO YENKULUNKULU Injongo kunye neMvelaphi
Ngaba iIyunivesithi ezininzi?
Funda oko umfundi ayenako kuMgangatho woLungelelwano lweZiko (kunye nento engenziyo)
"I-Donuts ephezulu" nguTracy Letts
Ukuqonda iZimpawu kunye neZonyango zeBursitis
Iindleko kunye neenzuzo zeMimiselo kaRhulumente kaRhulumente
Konke NgoMongameli weTrans's Fair Deal ka-1949
Iingqungquthela zaseMadolobheni: Njani kwaye Kutheni Benza
Yiyiphi i-Hybrid Mode-ezimbini?
I-Egypt yasePredynastic - Isikhokelo sokuqala kwiYiputa yokuqala
Imithetho yeebhokisi yeOlimpiki kunye nokugweba
Jake Drake Bully Buster - Ukuhlaziywa Kweencwadi
Udumo Phakathi ko-Alexander Hamilton no-Aaron Burr
Craps Lingo kunye neSigama
UCleopatra VII: UFaro wokugqibela waseYiputa
À Chacun Son Goût - Kulowo Wakhe
Darshan - Ukujonga okanye Umbono
Izizathu Ezihlanu Zokuthenga I-Bow Bowling Yakho
Ukwakhiwa kweMikhali ye-Crust - Earth Elements